Madaxii shirkadda diyaaradaha ee Equatorial Guinea ayaa malaayiin la waayay
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Madaxii shirkadda diyaaradaha ee Equatorial Guinea ayaa malaayiin la waayay
MALABO — The head of Equatorial Guinea’s national airline has vanished after leaving the country on a business trip with cash worth millions of euros, a company official said Saturday.
Madaxa Ceiba Intercontinental Mamadou Gaye ayaa dalka ka dhoofay dabayaaqadii bishii February si uu ula xaajoono heshiisyada maamulada duulista ee Ghana, Senegal, Ivory Coast iyo Gambia si loo dhiso xafiiska galbeedka Afrika ee shirkadda curdunka ah, ayuu yidhi sarkaalku.
"Laakin ma jirin wax raad ah oo isaga laga helay tan iyo markaas," sarkaalka shirkadda ayaa u sheegay AFP isagoo codsaday in aan magaciisa la sheegin.
Gaye, oo u dhashay Senegal, asal ahaan ka soo jeeda Gambia, ayaa bishii mushaar ahaan u qaadan jiray 25 milyan oo CFA francs (38,000 euros), isha ayaa tiri.
"Waxa uu qaatay in ka badan 3.5 bilyan oo CFA francs (shan milyan oo Yuuro / 6.5 milyan oo doolar) iyo kayd ka mid ah qalabka dayactirka ee ATR (diyaaradaha) cusub," ayuu yidhi.
Gaye, oo ahaa maareeyihii hore ee Air Dabia ee fadhigeedu yahay Gambia, wuxuu yimid Equatorial Guinea 2007 si uu u maamulo shirkadda cusub ee Ceiba Intercontinental.
Duulimaadyadu waxay bixiyaan duulimaadyo u dhexeeya caasimadda Equatorial Guinea ee Malabo iyo magaalada labaad ee Bioko waxayna sidoo kale u duushaa Gabon, Cameroon iyo Benin.
Tibet si ay u hesho 3 milyan oo dalxiisayaal gudaha ah, ajnabi ah sanadka 2009
Dalxiiska Thai oo lagu weeraray xaalado degdeg ah oo cusub